Astaanta Aqalka sare oo la soo saaray maanta - iftineducation.com
iftineducation.com – Fadhigan ay xubnaha Aqalka sare ku yeesheen maanta magaalada Muqdisho waxaa soo xaadiray 43 xildhibaan, waxaana ajanduhu ahaa ka doodista iyo ansixinta Astaanta Aqalka sare, shaqaalaha uu Aqalka sare qaadan doono iyo sida ay Aqalka sare uga qeyb qaadan lahaa Gurmadka abaaraha.
Kulanka ayaa waxaa Shir guddoominayay Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah Guddoomiyaha Aqalka sare.
Ugu horeyn waxaa laga hadlay xaaladda Abaaraha iyo lacagaha sida loo gaarsiinayo waxaana la go’aamiyay in mudane waliba wixii uu awoodo ku wareejiyo Guddiga xubnaha Aqalka sare u xil saareen arrintaas oo shan ruux ka kooban.
Intaa ka dib, ayaa waxaa warbixin laga dhageystay Guddigii loo xil saaray Astaanta Aqalka sare uu yeelanayo, Guddigaas oo uu guddoomiye u ahaa guddoomiye xigeenka 1-aad ee Aqalka sare Abshir Maxamed Maxamuud (Abashir Bukhaari) ayagoona halkaas ku soo bandhigay Astaanta ay soo diyaariyeen, waxaana aragtidooda ka dhiibtay xubnaha kulanka fadhiyay.
Ugu dambeyntii waxaa cod loo qaaday Astaantii la soo bandhigay, iyadoo 43 xildhibaan oo kulanka joogay ay cod aqlabiyad leh ku meel mariyeen.
Gunaanadii kulanka xubnaha Aqalka sare ee maanta ayaa sidoo kale, waxaa Guddiga loo xil saaray in ay ka soo shaqeeyaan hannaanka loo marayo shaqaalaha uu Aqalka sare u baahan yahay, iyadoo natiijada arrintaan lagu go’aamin doono kulamada soo socda.